Ndifuna Ukwenza Uthando Kuwe ngamanzi anodaka - Okunye
Ndifuna Ukwenza Uthando Kuwe ngamanzi anodaka
Icacile into enamanzi oMdaka emva kweli nani le-sultry blues. Akalindelanga ukuba umfazi wakhe athathe uxanduva lwasekhaya njengokupheka, ukucoca, okanye ukuhlamba iimpahla, ukuba nje ufumanekile ekwenzeni uthando. Eyaziwa nangokuthi 'Yenza nje Uthando kum,' yabhalwa nguWillie Dixon, umntu waseChicago owayedlala ibass yeqela leChess Records kwaye wabhala iingoma zelebheli, uhlala ethatha isigqibo sokuba ngubani oza kurekhoda. Waqhubeka waba ngumntu onempembelelo kwi-blues kunye ne-rock 'n roll, eqhuba ngokukhawuleza kwi-Chuck Berry kunye noBo Diddley kunye nokubhala imilinganiselo ye-blues' Little Red Rooster, ' Indoda yaseHoochie Coochie , 'kunye' neSpoonful, 'phakathi kwabanye.
Amanzi akhatshwa nguDixon kwi-bass, u-Little Walter kwi-harmonica, uJimmy Rogers kwisigingci, u-Otis Spann ngepiyano kunye no-Fred Apha ngezantsi kwiigubu.
Amanzi, awenguqu yakhe yoqobo efike kwi # 4 kwitshathi yeR & B, wayibhala kwakhona le albhamu yakhe yowe-1968, Umbane wodaka , kunye neqela lomphefumlo we-psychedelic Rotary Connection njengeqela lakhe elixhasayo. Ikwabonakalise ngoo-1967 Super Blues , intsebenziswano phakathi kwaManzi, uBo Diddley, kunye noWalter omncinci.
Abanye amagcisa barekhoda oku, kubandakanya iRolling Stones, iGrateful Dead, iiKinks, iiYardbirds, uTom Petty kunye nabaphula iintliziyo, Abazalwana Abalungileyo, uRod Stewart, uVan Morrison, uAdele, nabanye abaninzi.
UFoghat ufumene ukubetha kwakhe okokuqala xa befaka isiciko kwi-albhamu yabo yango-1972, bafikelela kwi # 83 kwi-Hot 100. Ngo-1977 inguqulelo yabo ephilayo esuka kwi-albhamu Foghat Phila ibekho kwi # 33. Inguqulelo yabo ikwasetyenziswa kwimidlalo yeqonga ka-1993 Ndididekile kwaye Ndididekile kwaye yafakwa kwingoma yesandi eya kwiRob Zombie's IHalloween II ngo-2009.
U-Etta James urekhode oku kwi-albhamu yakhe yokuqala, Ekugqibeleni! (1960), njengecala elisecaleni le-hit Ingoma yesihloko . Ngotshintsho olwahlukileyo kumazwi oqobo kaDixon, uJames unomdla wokujongana nemisebenzi yasekhaya yesithandwa sakhe / umyeni wakhe athi Amanzi akafuni. Ngelixa wayenyanzelisayo, 'Andifuni ubhake isonka sam,' ucule, 'Into endifuna ukuyenza kukubhaka isonka sakho, ukuze uqiniseke ukuba uyondla.'
Inguqulelo yakhe yavuselelwa ngo-1994 Ukutya ukutya kweCoke Oko kubonisa iqela labasetyhini abathatha ikhefu emsebenzini ukujonga umsebenzi wokwakha o-sexy (uLucky Vanous) ngaphandle kwesakhiwo sabo seofisi. Ngenxa yokuthandwa kwentengiso yesini sayo esihlekisayo kwisichaso, uJames 'ongatshatanga waphinda wakhutshwa kwaye wabanjwa kwi # 5 e-UK. Ngo-2013, kwale ngoma yayisetyenziswa kwi intengiso efanayo yesiselo esinxilisayo, ngeli xesha esenza igadi entle (Andrew Cooper) endaweni yomsebenzi wokwakha. Umfazi umlahlela nge-Diet Coke, ethi iphuphume kuye xa eyivula, kwaye anike iqela labahlobo bakhe umboniso ngokususa ihempe yakhe.
Ndifuna into enje
soloko uhlala uthobekile kwaye ulungile ngexesha mcgraw
Cum ukuziva iingoma ze-noize
ungakhathazeki umntwana amazwi intsingiselo
Intsingiselo yokomoya ye-4444